Kedu ihe bụ njikarịcha search engine na otu esi arụ ya?
Gịnị bụ njikarịcha search engine? N'iji ya akọwa, SEO bụ usoro zuru ezu nke usoro iji mee ka ọnụ ọgụgụ na mma nke okporo ụzọ gị, nke sitere na nsonaazụ ọchụchọ ntanetị.
Gini bu isi ihe nke SEO? Iji ghọta ihe kachasị mma search engines, m na-atụ aro na nkọwa nke mbụ gawara n'ime isi ya atọ.
O doro anya na ka ị na-enwetakwu okporo ụzọ ị na-enweta, ọ ka mma ịzụ ahịa gị n'ịntanetị. Ọnụahịa nke ịzụ ahịa na-ezigara ndị ziri ezi na-abata na ibe weebụ gị site na ịpị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ (ndị SERPs).
Ogo nke okporo ụzọ
Site na nkọwa, mma okporo ụzọ pụtara itinye naanị ndị ọbịa ahụ nwere mmasị n'ezie na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ị na-eme - usa no deposit mobile casino bonus codes. Ọ dịghị ihe na-adọta ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa nile. Dịka ọmụmaatụ, ọ dịghị mma ịzụ ahịa, mgbe ndị na-achọ software na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ gị na-emeso mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, naanị n'ihi Google nyere ha ka ha mee otú ahụ.
Kachasịkarị, okporo ụzọ ndị njem bụ ihe ọ bụla okporo ụzọ, m. e. , ndị ị na-ekwesịghị kwesiri ịkwụ ụgwọ. Ya mere, ọtụtụ nsonaazụ ọchụchọ nwere ike ịmepụta ya na ọkwa dị iche iche a kwụrụ ụgwọ, chee echiche n'eziokwu ahụ.
Ịghọta ihe bụ njikarịcha search engine, ka anyị lee otú o si arụ ọrụ. Iji zuo oke nke oma, ana m atụ aro ka a na-eji obere oge eme ihe dị ka isi ihe maka ndị na-amalite. Inwe ihe omumu n'ozuzu n'okpuru, nweere onwe gi igwu na okwu obula obula i choro inwe nduzi.
Mepụta mkpokọta weebụ na usoro ihe omume SEO
Tupu ị banyekwuo n'ime okwu ahụ, ị ​​ga-achọ ijide n'aka na ewulitere ibe weebụ gị n'ụzọ dị mma. ndị na-arụ ọrụ na-achọpụta ngwa ngwa site na search engine. N'agbanyeghi ma ọ bụrụ na ị malitere ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ohuru, maọbụ chọọ ịchọta ihe dị ugbu a, SEO-friendly structure starts with selecting the right domain name, na nzukọ kacha mma na njikọ njikọ ụlọ.
Na-arụ ọrụ na ihe odide gị ma cheta: ọdịnaya bụ eze
Na-ewere ya n'efu - ọdịnaya na-abịa mgbe niile. E nwekwara otutu mgbanwe dị iche iche banyere isiokwu a. Ma enwere ọtụtụ ihe ị chọrọ ebe a - naanị ịchọrọ ịma banyere nchọpụta isiokwu, omume ndị a na-eme maka ịmepụta ọdịnaya SEO-enyi na enyi, na setịpụrụ ndị dị mkpa nke akara aka pụrụ iche na-enyere ndị ọrụ ọchụchọ ahụ aka (dị ka Google n'onwe ya) "ghọta" ọdịnaya gị.
Ntọala saịtị na ụfọdụ isiokwu metụtara njikọ njikọ
Ozugbo ị nwere obi ike na àgwà na SEO-friendly content, yana ihe ndị metụtara ọrụ ntanetị dị, ị dị njikere itinye miri emi n'ime ihe niile banyere ígwè ọrụ ugbo. txt, na-achọgharị ya. Banyere isiokwu ndị gbara ọkpụrụkpụ nke ụlọ njikọ, ana m atụ aro ka ịmalite ịmụta ihe niile banyere edemede arịlịka, iji nweta nghọta ka mma banyere usoro redirection. Ozugbo emere ya, tụlee nyocha maka ụfọdụ ihe mgbochi, dị ka ịde blọgụ ndị ọbịa, inweta njikọ, na mgbe ị ga-eji oche ala. Ozugbo i nwetara ha niile, ị ga-adị njikere ịga maka isiokwu ndị dị mkpa dịka ntụgharị nyocha nke ọnụego, SEO obodo na mba, na na.